China Portable Whiteboard, mpempe akwụkwọ ndọta ndọtị ndọta ndọtị, ndọtị na-eweta ihe mkpuchi
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:Igwe ndọta ndọta,Mpempe akwụkwọ ndọta ndọta,Mpempe akwụkwọ ndọta ndọta,Rolls Whiteboard,Nnukwu ogwe,
Home > Ngwaahịa > Igwe eji magnetik anabata ihe
Ngwaahịa nke Igwe eji magnetik anabata ihe , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Igwe ndọta ndọta , Mpempe akwụkwọ ndọta ndọta suppliers / factory, wholesale high-quality products of Mpempe akwụkwọ ndọta ndọta R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Mpempe akwụkwọ ndọtị Reusable
China Igwe eji magnetik anabata ihe Ngwa
Mpempe akwụkwọ ndọta ndọta
Mpempe akwụkwọ Igwe Ọdụdọ Magnetiki bụ otu ụdị bọọdụ ndị na-agbanwe agbanwe. Ọ dị mfe ịkpụ, gbarọ agbagọ, kpuchie ya, ma ọ bụ nwee ike ịbugharị ya n'ụdị ọ bụla. Yabụ enwere ike ịmegharị ya ka ịchekwa ohere ma buru ibu n'ụzọ dị mfe.
Ọmarịcha Ide-na nhichapụ-ehichapụ
Mpempe akwụkwọ Igwe Ọdụdọ Magnetiki nwere ezigbo ọde ederede na nhichapụ nhichapụ . Ntutu PET dị mma, nguzogide ihu igwe dị mma. Ọ bụ ihe ekwekọrịtara maka ọtụtụ mkpịsị odee, dị ka akara akara ọcha na-ehichapụ, dị mfe ide ma hichapụ. Maka mkpịsị akwụkwọ akara agba nkịtị, a ga-ehichapu akara n’ime otu ọnwa. Ọ bụrụ n ’akara a na-apụ na bọọdụ ọcha ruo ogologo oge na enweghị ike ihichapu, biko jiri ihe ọcha ma ọ bụ mmiri ọholicụholicụ na-egbu egbu pụọ.
Ọtụtụ okike okike
Igwe a na-ahụ maka ihe ndọta t bụ Ejiri ezigbo PET na mpempe akwụkwọ. A na-eme mpempe ígwè site na ịgwakọta ntụ ntụ na plastik (CPE wdg). O nwere ikike ige nti ndọta. Ihe nkiri a na- acha ọcha na -aghọwanye ndị na-ewu ewu maka iji ya dịka akwụkwọ ahụaja whiteboard ma ọ bụ akwụkwọ ndọta. Nke a na whiteboard enye e t nwere ike gbanwere na / ma ọ bụ dochie mgbe etinyere a mgbidi na-nwere a oyi akwa nke anyị magnetik sheeting na nrapado. Restaurantslọ oriri na ọ businessesụ ,ụ, azụmaahịa, ụlọ akwụkwọ ọta akara na ndị nwere ụlọ nwere ike ịgbanwe akwụkwọ mgbidi ha ngwa ngwa dịka ọnọdụ ha, ezumike ha, ma ọ bụ oge ha. Enwere ike itinye ọtụtụ akwa iji mepụta atụmatụ na ịchọ mma. Dị ngwaahịa a mepụtara ọtụtụ ịchọ mma na ohere mgbasa ozi dị iche iche.
Atọta K inds W hiteboard S maka Guest N eeds
1. onwe nrapado Whiteboard ka nke siri ike nrapado, yabụ ogwe bọọdụ dị mfe ịwụnye na agaghị ada ada ngwa ngwa. Mpempe akwụkwọ nchara nke bọọdụ bọọdụ nwere akụkụ ụfọdụ nke na-arụ ọrụ nke na ọ na-etinye na enweghị wrinkles na enweghị afụ. Enweghị mkpa igwu ala n'ime mgbidi gị ma nwee ike ịwụnye ọ bụla dị larịị dị ka desktọpụ, kabọt na ihe ndị ọzọ. Site n'ụzọ, Mpempe akwụkwọ Igwe Ọdụdọ dabara adaba ịwụnye na mpempe akwụkwọ ndọta anyị nwere maka dochie ochie akwụkwọ nkwụchi onwe nke ochie .
2. mbughari nrapado Whiteboard ka nke elu mma reusable nyagide, kwukwara mwepụ maka na-na-na-aga agagharị na Self nrapado W hiteboard. Ọ bụrụ na akwa ahụ ruru unyi, ọ ka ga-arapara n'ahụ mgbe ịsachara.
3.None nrapado W hiteboard ga-arụnyere na magnetik ezigbo elu, ma ọ bụ idozi ya ka ọ bụla dị ọcha na-eji ire ụtọ elu na abụọ-kwadoro nyagide ma ọ bụ ndị ọzọ. Ọ dịghị ihe nrapado W hiteboard nke enwere ike ịgbanwere na / ma ọ bụ dochie ya mgbe akpọrọ m na magnetik larịị .
Igwe ndọta ndọta
Ihe ndọta ndọta
Igwe ndọta ndọta Mpempe akwụkwọ ndọta ndọta Rolls Whiteboard Nnukwu ogwe Ihe ndọta ndọta